म सँग रामेछापलाई समृद्ध बनाउने योजना छ –युवानेता रोज - Bartamansamaya
रामेछाप जिल्ला खाडादेबी गाउपालिकाका युवा नेता रोज बहादुर मोत्तान २०५४ सालबाट बिद्यार्थी राजनितीमा सक्रिय हुनुहन्थ्यो । त्यसपछि माओवादि आबद्व तामाङ संघको उपाध्यक्ष हुदै माओबादि पाटीको खाडादेबी गा बि स को पाटी सचिब समेत हुनुभयो । नेपालको राजनैतिक उत्तरचडाब सँगसँगै पहिचानलाई आत्मसाथ गर्दै संघीय समाजबादी फोरम नेपालमा आबद्व भई रामेछाप जिल्लाको पाटी सचिब र तामसालिङ प्रदेश समितिमा रहेर काम गरिरहेका युवानेता रोज जिल्लाको प्राय सबै खाले बिकासे कार्यमा सक्रिय देखिने गर्नुहुन्छ । बिभिन्न संघ संस्थामा रहि जिल्लामा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नुहुने युवानेता श्री बुद्व प्रा.बी.को बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेर काम गरिसक्नु भएको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा संघीय समाजबादी फोरम क्षेत्र नं. ३ रामेछापबाट समानुपातिक तर्फको प्रत्यासी उमेद्वार हुनुहुन्छ । उहाँसंग यहि निर्वाचनको बिषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः
तपाईको उमेद्वारी नै किन ?
मुल एजेन्डा पहिचान सहितको संघीयता र संबिधान संसोधन हो । आर्थिक समृद्वि, दिगो शान्ति, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र वेरोजगारी देशमा अत्यन्तै खड्किएको बिषय हो । पछिल्लो समयमा मुलुकले संविधान त पायो तर पहिचान सहितको संबिधान पाउन सकेको छैन, समृद्धि पाउन सकेको छैन । यस परिवर्तित संदर्भमा रामेछापलाई आर्थिक समृद्व, स्थानिय स्तरमै रोजगार सृजना गर्न साथै रामेछापलाई देशकै एक उदाहरणिय जिल्ला बनाउन आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा पर्यटन सम्बन्धि दिगो बिकास गरि मुलुकलाई समृद्व बनाउन मेरो प्राथमिकताका क्षेत्रमा नागरिकको आधारभूत स्थास्थ्य, शिक्षाको नैसर्गिक अधिकार, युवालाई स्वदेश मै ब्यवसायीक रोजगारी, विकासका पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, विद्युत, सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकासले सिंगो जिल्लालाई समृद्ध बनाउने र पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा विस्तार गर्ने अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु रहनेछन् ।
के के गर्नु हुन्छ त ?
रामेछाप आर्थिक समृद्व बनाउनको लागि प्रयाप्त स्रोत साधन भएको जिल्ला हो तर उचित रुपमा पहल नहुनु नै यहाँका जन्ताहरु पछि परेका हुन ।
सर्वप्रथम त स्थानिय स्तरमा नै उद्यमको बिकास गरि युवाहरुलाई बिदेश पलायनबाट रोक्ने छु । आधुनिक तथा ब्यबसायिक कृषि प्रणालिलाई बिस्तार गर्नेछु ।
यहाँ सुनकोशी तामाकोशी जस्ता ठुला र धेरै नदिहरु छन् जसबाट हाइड्रो निर्माण गरि स्थानिय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने र जनतालाई सुलभ बिद्युत उपलब्ध गराउने छु । एक घर एक खानेपानी धारा बिस्तार गर्नेछु ।
बिकासको पूर्बधार सडक भएपनि जिल्लाका सबै क्षेत्रमा सडक पुग्न सकेको छैन ति सम्पुर्ण क्षेत्रमा आधारभुत सडक निर्माण गर्ने छु ।
सडकहरुको स्तरोन्नती, ग्रामिण सडक र कृषि सडकको विस्तार गर्नेछु ।
खेलकुदको बिकासको लागि बिभिन्न ठाउमा खेलमैदान निर्माण गरि युवाहरुलाई खेल प्रति उत्साहित बनाउने छु ।
शिक्षा प्रचारमुखि मात्र भइरहेकोले प्राबिधिक तथा ब्यबहारिक शिक्षा प्रणाली लागु गराउने छु ।
जनताको स्वास्थ्य उपचारमा निशुल्क बनाउन जोड दिई ब्यबसायिक बनाउने प्रबृत्तिलाई न्युनिकरण गर्ने छु ।
बाम तालमेलले असर पु¥याउला नी ?
खासै असर पु¥याउदैन । केहि प्रभाब पार्नु सामान्य हो । यो क्षेत्र पहिचान पक्षधरको पकडमा रहेको क्षेत्र हो । स्थानिय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने चाहि कठिन जस्तो देखिन्छ । तर सामाजिक उतरदायित्व अरु संग छैन त्यो समाज प्रतिको उतरदायित्व म सँग छ । बरु म रित्तिउला तर रामेछापको दिगो बिकास गरि जनतालाई सु सम्पन्न बनाउने छु । त्यसैले मेरो जित निश्चित छ ।